रामजी ज्ञवाली - Saptahik Magazine
रामजी ज्ञवालीका लेखहरु
नेपाल र नेपालभन्दा बाहिरका विभिन्न देशमा हप्तैपिच्छे मेला महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने मौसम हो यो । यद्यपि सबै ठप्प छन् । काठमाडौं र देशका ठूला शहरमा मध्यरातसम्म खुल्ने दोहोरी सााझ, नाइट क्लबहरू सुनसान छन् । परिवारसाग बसेर खान समेत नभ्याउने कलाकारहरूको यो समय कोरोना (कोभिड १९) लक डाउनमा थुनिएको छ ।
कलाकारलाई कोरोनापछिको चिन्ता
गायकहरू रेकर्डिङ स्टुडियो जान पाएका छैनन् । सिनेमाको छायांकन रोकिएको छ । डबिङ रोकिएको छ । देश–विदेशका कार्यक्रम रोकिएका छन् । चलचित्र हेर्ने, आफूलाई मन पर्ने परिकार बनाउने, गीत हेर्ने, सुन्ने र नजिकका आफ्ना आफन्त तथा साथीसँग गफ गरेर उनीहरूको दिन बितिरहेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमपछिको लकडाउनका कारण दैनिक गतिविधी ठप्प छ । यसै मेसोमा गायक प्रमोद खरेल पनि घरमै बस्न बाध्य छन् । हरेक दिनजसो देश–विदेशको कार्यक्रममा व्यस्त हुने यी गायक अहिले के महसुस गर्दैछन्, प्रस्तुत छ उनीसँगको गफगाफ :
हास्य कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’सँग रामजी ज्ञवालीले सोधेका छन्– यस्तो अवस्थामा समय कसरी कटाउने ? उनको उत्तर :
म्युजिक भिडियोमा फिल्म स्टार
‘म्युजिक भिडियो भनेको एक दिनको काम हो। साँझ घर फर्किने बेला खल्तीमा १ लाख आउने भएपछि किन काम नगर्नु ? रेकर्डिङमा पनि जानु नपर्ने, फिल्मको जस्तो प्रमोसनमा पनि हिँडिराख्नु नपर्ने, पैसाका लागि किचकिच पनि गर्नु नपर्ने । यस्तो सजिलो काम पाएपछि कसले गर्दैन ?’
‘आमा’ भर्सेज ‘सेन्टी भाइरस’
दुवै चलचित्रको अहिले मल्टिप्लेक्स बुकिङ खुलिसकेको छ । क्युएफएक्स चेनले ‘आमा’लाई २४ शो दिँदा ‘सेन्टी भाइरस’लाई ५० शो दिएको छ । राजधानीका मल्टिप्लेक्स हलहरुले ‘आमा’भन्दा शो बाँडफाडमा बढी प्राथमिकता ‘सेन्टी भाइरस’लाई दिएका छन् ।
नेपाली हुनुको नाताले नेपालको चलचित्र उद्योग विश्वभर पुगोस् भन्ने चाहाना स्वभाविकै हुन्छ । यद्यपि, नेपाली चलचित्रमा काम गर्नुअघि बलिउडमा काम गर्थे । बलिउड संसारकै ठूलो चलचित्र उद्योग हो, यो स्विकार्नुपर्छ ।
डेब्यु परीक्षा : सफल भए त विराज ?
किड्नीका कारण निर्दोशले कसरी ज्यान गुमाउँछन् ? हुनेखाने र हुँदा खानेहरु विचका प्रेमिहरुको सम्वन्धमा परिवार कसरी भिलेन बन्छ ? अस्पताल प्रशासन जे गरेर हुन्छ, पैसा कमाउने खेलमा कसरी लाग्छ ? चलचित्रले देखाउन खोजेको विषय हो ।
जतिबेला स्मिता जन्मिइन् त्यतिबेला माओवादी द्वन्द्व निकै उत्कर्षमा थियो । उनी दार्जिलिङमा थिइन् । घरमा आमा–बुवा के गर्नुहुन्छ, कता जानुहुन्छ, बेला मौकामा भेट्न आउने मानिसहरुको हुन् ? किन आइरहन्छन् ? यावत् कुरामा स्मिता अनभिज्ञ थिइन् ।
अन्तिममा दर्शक र मिडियालाई सरप्राइज दिदै ‘ए मेरो हजुर ४’ साइन गरे । हातमा आएका केही चलचित्र र साइन गरिसकेको ‘धुपौरे’ छाडेर अनमोल किन ‘ए मेरो हजुर’को चौथो सिक्वेलमा लोभिए त ?
चलचित्र विकास वोर्डको अध्यक्षमा अब को ?
नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय चलचित्र विकास वोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त भएको डेढ महिना पुगेको छ । एकाएक वोर्ड अध्यक्षको पद रिक्त भएपछि यतिबेला चलचित्र निर्माता, निर्देशक तथा कलाकारहरु उक्त पदमा बहाली हुन बिभिनन शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् ।
विपिनलाई के लाग्छ भने, दर्शक पहिले जस्तो कलाकारको नाम र पोस्टर हेरेरै हल छिर्नेवाला छैनन् । उनीहरुका लागी चलचित्रको कन्टेन्ट बलियो चाहिन्छ । सोहि कारण धेरै चलचित्र धमाधम फ्लप भएका हुन् ।
मलाई अहिले आउनुभएका स्टारहरुका कारण खासै समस्या छैन । तपाईलाई थाहै छ होला, अधिकांश अभिनेताहरु लभ स्टोरी चलचित्र केन्द्रित हुनुहुन्छ । मेरो जनरा एक्सन हो । एक्सनमा मलाई चुनौती दिने कलाकार इण्ड्रस्टिजमै देखेको छैन ।
स्रोत भन्छ, ‘हमाल जी जस्तो छवि भएको व्यक्ति अहिले वोर्डमा पुगेर विवादमा पर्न चाहनुहुन्न । बोर्डमा अध्यक्ष भइसकेपछि राजनीति हावी हुने भएकाले उहाँको मुड अहिले बोर्डमा अध्यक्ष हुने खालको छैन ।’
नेपाली हलमा विदेशी चलचित्रको रजाईँ
चलचित्र निर्माणमा गम्भिर हुन नसक्दा नेपालका चलचित्रले लोप्पा खाइरहेका छन् । मिहेनत कम गर्ने, अर्को चलचित्रसँग भिडाउने र विषयवस्तुमा ध्यान समेत नदिएर चलचित्र प्रदर्शन गर्दा नेपालका धेरै निर्माता घरवार विहिन समेत हुन पुगेका छन् । तर, हल्लाको भरमा धेरैले यो पिडा न देख्न सकेका छन् । न सुन्न खोजेका छन् ।